Lungisa: 0x80240034 Impazamo yokuhlaziya yeWindows ngaphakathi Windows 10 | Ulondolozo lweBios
Lungisa: 0x80240034 Impazamo yokuhlaziya yeWindows ngaphakathi Windows 10
I-3 iminyaka edlulileyo
1 Lungisa: 0x80240034 Impazamo yokuhlaziya yeWindows ngaphakathi Windows 10
1.0.1 Faka uhlaziyo kamva
1.0.2 Jonga unxibelelwano kwaye ulungise ukuba kukho naziphi na iingxaki
1.0.3 Khipha i-antivirus yomntu wesithathu, iVPN, okanye isoftware yomlilo
1.0.4 Hlaziya uHlaziyo lweWindows kwiWindows
1.0.5 Isixhobo soKhangelo lweFayile yeNkqubo
1.0.6 Jonga iRegistry
1.0.6.1 Unobangela wale mpazamo
Qala "Windows 10" Isisombululo: 0x80240034 Impazamo yokuhlaziya yeWindows ngaphakathi Windows 10
Ngaba uyifumene impazamo yokuHlaziya yeWindows 0x80240034 kuyo Windows 10? Ukuba impendulo nguewe, ke uza kufumana ezinye izisombululo ekulula ukuzisebenzisa ukulungisa le ngxaki. Ingxaki ihlala isenzeka ngexesha lofakelo lohlaziyo kwaye iphela ngekhowudi yokumisa 0x80240034.
> Njani >>
Faka uhlaziyo kamva
Ikhowudi yempazamo ye-0x80240034 inokubangelwa yivenkile yokuhlaziya eyaphukileyo okanye iphakheji yokuhlaziya phantsi kweWindows. Kwakhona, iMicrosoft yoHlaziyo loMncedisi inokuba sisizathu sayo, ke ukuzama kuya kuphumelela kamva
Jonga unxibelelwano kwaye ulungise ukuba kukho naziphi na iingxaki
Ukuba umxhasi weWindows unonxibelelwano olubi lwe-intanethi kwaye usilela ngokuphindaphindiweyo, kunokubangela le mpazamo. Ke, lungisa ingxaki ukuba ikho kweyakho Windows 10.
Khipha i-antivirus yomntu wesithathu, iVPN, okanye isoftware yomlilo
Ezi zixhobo zithintela ukukhuphela kunye nokufaka iiWindows kuhlaziyo ekubonakaliseni ikhowudi yempazamo 0x80240034. Zisuse ke ukuba unazo.
Hlaziya uHlaziyo lweWindows kwiWindows
Ungaseta kwakhona uhlaziyo lweWindows ukuba ezi ndlela zilapha ngasentla aziphumelelanga. Landela la manyathelo angezantsi.
1 nyathelo Qalisa umgca womyalelo kunye nemowudi yolawulo ngokuchwetheza cmd kwibhokisi yokukhangela kwibar yomsebenzi. Khetha 'Qhuba njengomlawuli' kuludwe lwemenyu yomxholo.
Inyathelo 2 Ngenisa le miyalelo ilandelayo kwiphaneli emnyama ngokulandelelana kwayo kwaye ucinezele Yazisa ngalo lonke ixesha -
3 nyathelo : >> Inyathelo 3
ren C: NWindowsSoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C: NWindowsSystem32catroot2 Catroot2.old
> Qala kwakhona
Isixhobo soKhangelo lweFayile yeNkqubo
1 nyathelo Ngoku thayipha i-SFC / SCANNOW kwilayini yomyalelo kwaye ungene iqhosha lokungena .
Ukuba la manyathelo awancedi, zama oku kulandelayo (kodwa yazi ukuba kukho ingozi yokuphazamisa kwirejista).
1 nyathelo Fikelela kumhleli wobhaliso ngokuchwetheza i-regedit kwindawo yokukhangela kunye nokucofa Entrar .
Inyathelo 2 : Khangela kwiphaneli yasekhohlo uze ungene kuyo
3 nyathelo Cima amangenelo WUSserver y WISTtusServer kwicala lasekunene (ukuba likho).
> Emva koko>
Unobangela wale mpazamo
0x80240034 Impazamo yokuHlaziya yeWindows kuthetha ukuba i-WU_E_DOWNLOAD_FAILED, ithi uhlaziyo aluphumelelanga ngexesha lokukhuphela.
Ukuzalwa kwebhlog Tech ubonise umsebenzisi ekhalaza kwibhlog yakhe-
Uhlaziyo aluzange lulayishwe kwaye lucutshungulwe ngendlela enye. MSR-] Isixhobo esixhonyiweyo sokususa i-malware, ufakelo lweAdobe Flash Player olutshitshisiweyo ngomyalezo wemposiso. Emva kokufaka uhlaziyo oluqokelelweyo, kunye ne-99% yokukhuphela ikhefu, i-MSR-Tool kunye neFlash player yokukhuphela iphumelele kodwa yahluleka ngexesha lofakelo. Emva koko, uMkhuseli uxele (ngokusekwe kwiirekhodi ezili-12/12/17) ezinye iziphumo. Emva kokuvala nokuphinda uvule umsebenzi wohlaziyo, lonke uhlaziyo lufakelwe ngempumelelo. Umyalezo wempazamo ngeFlash kunye neMSRT: 0x80240034.
Kweli qonga leempendulo zeMS ngesiNgesi impazamo yokuhlaziya umyalezo 0x80240034 iye yaqwalaselwa ngexesha lofakelo lwe Windows 10 Ukujonga kwangaphakathi.
Iingxaki zohlaziyo lweWindows zihlala zinzima kubasebenzisi be Windows 10. Iimpazamo zikuthintela ekufumaneni amanqaku anamhlanje kwaye zikushiye kwindawo ekhuselekileyo. Ngethamsanqa, sifumene izilungiso kwimpazamo yokuHlaziya yeWindows 0x80240034 kwi Windows 10. Ukuba unemicimbi ekuhanjisweni, nceda usazise.
5/5 - (3 iivoti)